IXiaomi Mi 8: ene "Notch", i-ID yobuso, ubukrelekrele bokufakelwa kunye neenguqulelo ezintathu ezahlukeneyo | Iindaba zeGajethi
Iflegi entsha yeXiaomi ekugqibeleni isemthethweni. Inkampani yaseAsia ibhiyozela unyaka wayo wesibhozo kwaye yenza njalo ngeXiaomi Mi 8 onokuthi ukhethe kwiinguqulelo ezintathu: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE kunye noXiaomi Mi 8 Explorer Edition. Le yokugqibela igcina isimanga kuyilo ngelixa iXiaomi Mi 8 SE iphethe ukubeka iprosesa entsha ye-Snapdragon 710 ekujikelezeni.
IXiaomi Mi 8 yimodeli ekulindeleke ukuba ihlale iinyanga. Amahemuhemu ahluziweyo ahlukile kwaye ekugqibeleni sinawo phakathi kwethu. Kwintetho, Inkampani ibothusile abaphulaphuli ngenkcazo yemodeli ezintathu eyahlukileyo IXiaomi Mi 8 SE yayisele isaziwa. Kodwa akukho nto yenza umntu okrokrela ukuba iXiaomi Mi 8 Explorer Edition nayo izakwaziswa.
Zonke zihlaziyiwe. Iimodeli ezinkulu kakhulu ziqhelekileyo iXiaomi Mi 8 kunye neXiaomi Mi 8 Explorer Edition ngezikrini ezingama-intshi ezingama-6,21, ngelixa imodeli ye-SE ishiywe yiphaneli efikelela kwii-intshi ezi-5,88 ngokulandelelana. Kwelinye icala, ngaphakathi kwezi smartphones siza kufumana ukwahluka kweeprosesa zeQualcomm: siya kuba noluhlu oluphezulu lwe-Snapdragon 845 kunye nomchasi omtsha oza kulwa kuluhlu olungasentla oluphakathi: Snapdragon 710.
Kwelinye icala, bekukho intetho yokuba kunokwenzeka ukuba umfundi weminwe ahlanganiswe kwiscreen. Kwaye ngokuyinxalenye kuyinyani: Iya kufumaneka kuphela kuhlobo olucacileyo lwe-Explorer Edition; ezinye iimodeli ezimbini ziya kuba nomfundi ngasemva ecaleni kwenzwa yekhamera kabini.
Ewe, uXiaomi akakwazanga ukumelana kwaye ukhethe ukubandakanya "iNotshi" yesiqhelo eyenziwe yi-iPhone X kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Njengoko bengakhange bakwazi ukumelana nokufakwa Ukuqwalaselwa kobuso ngenxa yekhamera yayo yangaphambili. Ngaphezu koko, bayibiza ngokuba yi-ID yobuso-izandi eziqhelekileyo.
Okwangoku, kwinxalenye yenkqubo yokusebenza, I-MIUI-u-Xiaomi umaleko wesiko- uya kuba ngumlinganiswa ophambili kwaye ifikelela kwinguqulelo yesi-10. Ngale ndlela, inkampani izinikele kwi-Artificial Intelligence -into ezinye iimveliso eziye zafuna ukuyidibanisa-, zombini kwinxalenye yokufota kunye nasekukhuthazeni umncedisi wayo obizwa ngokuba Xiaomi AI.
Okokugqibela, amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeke kwimodeli esiyikhethayo. Kwakhona, kuya kufuneka ukhumbule ukuba Sinokuba nemodeli ene-8 GB ye-RAM ukuya kuthi ga kwi-256 GB yendawo yokugcina. Umphezulu woluhlu, i-Xiaomi Mi 8 Explorer Edition iya kubiza i-3.699 yuan (malunga ne-500 euro ngexabiso lotshintshiselwano lwangoku). Ziyathengiswa e-China ukusukela nge-5 kaJuni ezayo.
Ukuba ufuna ukubazi ngokusondeleyo, yima nge inqaku lethu apho siphonononga ngendlela egqibeleleyo ngakumbi zonke iinkcukacha ukuba nganye kwiimodeli ezintathu ze Xiaomi Mi 8.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Xiaomi Mi 8: nge «Notch», i-ID yobuso, ubukrelekrele bokufakelwa kunye neenguqulelo ezintathu ezahlukeneyo
I-Atari VCS ngoku iyafumaneka ngoku-odolwa kwangaphambili